China Carbon steel pipeipe mill for kwesakhiwo steel pipe ifenitshala 500KW parallel Solid State HF Welder mveliso kunye nabenzi | Mingshuo
Ukuveliswa kwemveliso ye-500kw IGBT yombuso oqinileyo we-hf welder
1. Ikhabhathi yokulungisa
2. Isiguquli somlungisi
3. Ikhabhinethi ye-inverter
5. Utshintshiselwano lwamanzi omoya opholileyo
Imveliso Ipharamitha (imigaqo) ka-500kw aqhelelkileyo high ityhubhu zikarhulumente eqinileyo yokwenza izixhobo umbhobho ukuwelda umatshini
Imveliso amandla 500kw
Uluhlu oluphakanyisiweyo lweemibhobho ezinokufakelwa nge-500kw izixhobo eziphezulu zokufakelwa kwe-welding
Umbhobho 76-160 mm
Udonga lombhobho ubukhulu I-2.0-6.0mm
Iwelding Mode Uhlobo loqhakamshelwano loMatshini oSebenzayo oPhezulu oQhelekileyo oSetyenziswa rhoqo
Indlela yokupholisa Sebenzisa inkqubo epholileyo yomoya-wamanzi ukupholisa uhlobo lwe-induction 500kw solid solid frequency high welder
Iinkcukacha zobume beseti enye ye-500kw isiguquli sesiseko sokuhambisa isantya esiphakamileyo
CabinetIkhabethe yokulungisa: ngokuhluza, ukwahlula, inkqubo yolawulo lwengcinga kunye nokusabela kwisekethe yokuhluza ngokupheleleyo. Qinisekisa ukuqhubekeka kunye nokuhamba ngokugudileyo kombane we-DC, amandla olwa nongenelelo, kwaye akukho harmonics kunye nokungqubana. Ukunikezelwa kwamandla kwibhodi yesekethe yolawulo kunye nebhodi yecandelo lamandla isebenzisa umbane oswelayo, oqinisekisa uzinzo lwenkqubo yokuhambisa umbane kunye nokuziqhelanisa ngokubanzi neevolthi. Iziphumo zombane we-DC zihlala zilungelelaniswa, kwaye ubuninzi bevolthi ye-DC ngama-250V, ephucula kakhulu ukhuseleko lwabaqhubi.
Isiguquli esiguquliweyo: umyinge wotshintsho lwe-400V / 205V.
Ikhabhinethi ye-Inverter: I-LC ejikelezayo yesekethe eyenziwe ngombane we-capacitor kunye ne-coil ye-inductance. Zonke iibhodi zezinto zamandla zisebenzisa iitransistors njengeyunithi yamandla yetemplate. Isekethe ejikelezayo ye-LC yahlukile kwisekethe ejikelezayo yemowudi yetyhubhu yombane. I-tank circuit capacitor C ihambelana ngqo ne-coil ye-induction L, kwaye akukho siphumo soguquli, esinciphisa kakhulu ilahleko kwaye siphucula ukusebenza kakuhle kwayo (ukusebenza kakuhle ngama-25% -30% ngaphezulu kunesiciko se-high frequency vacuum tube welder) .
ConsoleCentral console: ilula kwaye kulula ukuyisebenzisa.
Inkqubo yokutshintshiselana ngamanzi-Umoya: Wenziwe ngotshintsho lobushushu, ukujikeleza kwempompo, isahluli samanzi kunye nenxalenye yolawulo lombane.
Umatshini wokuwelda ohamba rhoqo luhlobo olutsha lwezixhobo zokufudumeza ungeniso, ubukhulu becala zisetyenziselwa ukufakela izixhobo zombhobho zentsimbi, i-welding yezixhobo ze-alloy, i-welding ye-carbide saw blades, i-welding ye-diamond blade blade, i-welding ye-marble blade blades, njl.
Egqithileyo Izixhobo zensimbi eziTyhidiweyo zeZixhobo zoLungiso lweeNtsimbi zoMbane oMatshini oMatshini o-400KW wokutshisa ubushushu besinyithi
Okulandelayo: I-MOSFET -State Solid -state High izixhobo zokufudumeza zokufudumeza ityhubhu enkulu ye-600KW ngokuhambelana neSolid State HF Welder